fampandrosoana – Blaogin'i Voniary
Étiquette : fampandrosoana
Ny Teny Malagasy : Fanentanana ny Fon’ny Vahoaka amin’ny Fampandrosoana (Tapany II)
Fa ho hafa noho izany (Jereo ny tapany I) kosa ny zava-niseho raha tahaka izao no nitondrany ny teniny. "Misaotra anareo, lehiretsy, namaly ny antso nataonay. Isika izao mantsy no fody niara-nitsindroka sy akanga niara-nanjohy, ka tonga amin'ilay hoe : tsindranolahy an-keniheny, ka ny tama-miray ihany no miaraka." Manana tsirin-kevitra sy vinavina ho enti-mampandroso ity... Lire la Suite →
Lahateny nataon’i Rado tetsy amin'ny Akademia Malagasy tetsy Tsimbazaza, ny 25 Jona 1994, indray no entina amintsika anio. Samia àry maka izay tandrify azy avy : Tompokolahy sy Tompokovavy, Tantara kely iray no entinay ho fampidirana izao famelabelarana izao. Hoy ity tovolahy iray avara-pianarana sady tia tanindrazana, raha namory ireo tanora tantsaha sakaizany izy, teny ambanivohitra... Lire la Suite →
Père Henri de Laulanie - Association Tefy Saina « Le développement de Madagascar doit se faire de l’intérieur, c’est-à-dire à partir de ses ressources propres et l’homme doit en être un acteur à part entière. » Famintinana: Navondron’i Mompera de Laulanie ao anatin’ity tahirin-kevitra ity ny traikefa azony nandritra ny 25 taona niasany teto Madagasikara. Tsy nahomby... Lire la Suite →